Gafiileen deddeebi’ani gaffataman - Seattle Traffic
Saganta Filaanoo Deemsa Dhiha Siiyatili (West Seattle Travel Options Program)
Muummeen/ ijii akeekoota Filaanoo Deemsa Riqichi Dhiha Siiyatili (West Seattle Travel Options) maali?
Gara Riqicha Dhiha Siiyatili, keesa, aala fi naano Siiyatili deemsa qofaa oofan xiqeessuun Riqiica jalaa ka Dhiha Siiyatili cuufamuu irra traaffiiki salphiisa
Ilgalcuu Siiyatili, keesa, aala fi naano Ilgalcuu Siiyatili geejjiba barbaadan fayaadamuuf filaacuu jajjabeesuu, deggeeruu, fi dabaluu/ daruu.
Karaan irra googooree hawaassa traaffiikii waliit-ciinqaameen miidhaman kara soocoo’aaniin gargaaruu fi deggeeruuf.
Aafaan kamtu deggeerama?
Filaanoon Deemsa Ilgalcuu Siiyatili (West Seattle Travel Options) afaan sagaaliin jira (Ingliizifa, Spaaniishi, Aafaan Soomali, Aafaan Oroomo, Aafaan Veeytnaami, Aafaan Caayina Salphaatee, Aafaan Caayina ka aadaa, Aafaan Kooriya, Aafaan Khmeeri)።
Odeeffannoo waliigalaatiif namoonni eesa deemu danda’aan?
Qu’annoo filaanoo deemsa keeti godhuufi, qabeenya ol’aanaa fuula Filaanoo Deemsa Ilgalcuu Siiyatili (West Seattle Travel Options) irrati to’aadha.
Imala Kee Gargalciin (Flip Your Trip) maali?
Duuli Imala Kee Gargalcii (Flip Your Trip) namooni geejjiba konkoolaata tokoon deemanu fakeenaaf filanoo geejjiba birra, vaani (otobisi diiqa) waliin qoodatanii yaabacuu, biskiileetin yaabu, skuutaran deemu, acuuma naano jiran turuu ykn sa’ati traffiikiin hin bayyaanee oofuu ka fakaatu goodhuf wadaa galuu jajjaabeesu. Duuli kuni deggeersa meeshaale itti daree, kanaan gaad kan jiraan dabalata:
Jal qabaa gatii malee qarshii $25 geejjiba yaabachoota
Baati durra gatti malee vaani (otoobisi xixiqqa) wajiin qoodatanii deeman + riqiicha gaddi gatti malee wajiin qoodatanii daqaabu
Geejjiba karoorfaacuuf gargaarsa
Duula ammayyoomsuu fi dhaadhessuu haarra
Sochii adda addaa
Namooni akamiit galmeefaman?
Uunkaa salphaa guutudhan ga’eesa ta’uu keeti mirkaneesu Ilgalcuu Siiyatili (West Seattle), Paarki Kibba (South Par) ykn Joorjtawun (Georgetown) jiracuu ykn dalagu aka dandeetu fi yo xinaattee naam tookooff qoofa deemsa kara birrati bakkaa buusuu waada seenuuf gara FlipYourTrip.org deemi.
Itti aanee maaltu ta’a?
Eerga galmeeffateen duuba imeeyli icciti affeeruu koodi (Invite Code) birra baga nagaan dhuftaani ka jeedhuu wajiin deemsa duwwaan taaxii bishaani fi e-skuutaraan deemuuf qarshii $25 qeeba’a akaamiit aka argaatu oodeefanoon si ga’a. Kuni qajeelfamooti lamaan kara hojimaatessuu Metro’s Transit Go tiikeeti warra talafooni harkaan (smart phone) fayyaadamman hojjii irrat oolcuu fi jara talafooni harkaa (smart phone) hin qabneef filaano akaamiit aka kaardii ORCA itti fayyaadamman dabalatee wajjin wal qabatan.
Duuli kuni maaliif hojimaatessuu fayyaadama?
Duuli Geejjiba Keeti Gargalcii (Flip Your Trip) tiikeeti Metro’s Transit GO ti faayyaadamma maaliif hojimaatessuun kuni tiikeeti atti duwaan iti deedeemtu suni fi gatii/ taariffa ittiin dabaartu walliit fidee amala badhaasa qabxii keeti heerega keetiit waliit dabalu qaba. Aaka dhuugaati, geejjibi kankee ka hojimaatessuu irra jiru ka durra qarshii $5 akaasuumati siif argaaciissa. Hojimaatessuun Transit Go micuu motoora biskiileeta xixiiqaa, Layima (Lime), Liinka (Link), Espiina (Spin) fi Wheels wajjjiin degeejjiica duuwa dhiheesiisu nu dandeesiisa. Hojimaatessuu kana itiin faayyaadammuuf rakoon ta’eeyu yo qabbatee, adeemsa kana keesa hojimaatessuu qindeesiitee fi qabxoota itiin yaabatee aaka deebiifatuu qajeelfaman keenya ka tarkaanfiti tarkaanffit si geegessuu danda’a. Android fi iOS/iPhone (talafooni harkaaf) jira.
Yaabatoota duuwa hojimaatessuu keesa jiru akaam iti dhaqaba?
Yabaatooti Transit Go yaabacuufi qabxoota keenamuu aka horrii iti fayyaadamma. Kanaafi, qarshiin $25 kee duwaan/ gatii malee itiin yaabatuu hojimaatessuu keesat aaka qabxoota 2500 amala badhasa hojimaatessuu iti fayyaadammu ka yaabatoota “bituuf” dandeetu ta’ee argaama. Adeemsa kana keesat qajeelfamaan keenya tarkaanfiti tarkaanffit si geegessuu danda’a.
Talafooni harka (Smartphone) yo hin qabaannewoo?
Talafooni harka (Smartphone) ykn karoora data kompuutara yo hin qabaanee, adarra kardii ORCA haarra qarshii $25 ka itii fa’amee fudhacuufi info@FlipYourTrip.org emaili godhii.
Ammaan durra Kaardii ORCA yo qabaadhee, Kaardii ORCA kiya ka jiru irraat qarshiin $25 itii fa’uu in danda’ama?
Kardii ORCA kankee jallaacuu keetiifi bayee gammaana! Garuu, kardoota ORCA amma qabdu irraati natoo/ horri dabaalu hin dandeenu. Jarri Talafooni harkan (Smartphone) fayyaadamtanu hojimaatessuu Transit Go aka mee’shaa geejjiba to’aannoo kee jala jirruut heereegdani aka yaaltanuu isiin jajabeesiina. Talafooni harka (Smartphone) ykn karoora data kompuutara yo hin qabaanee, adarra kardii ORCA haara qarshii $25 ka itii fa’amee fudhacuufi info info@FlipYourTrip.org emaili godhii.
Duulii akaamiiti otoobisii xixiqaa wajiin yaabatanu degeersa?
Otoobisi xixiiqa yaabatooni wajiin qoodatanu nuyi kara bayyeen degeeruut jirra; baatiin durra gatii duuwadha, otoobisiin xixiiqooti kuni riqiica qadiiti daqaabsuu, fi wajiin qodacuu otoobisi xixiqaa jala qabaacuufi yaabatoota 2 qoofa fudhata. Iti dabalamee, baati durra darbee gegeeramuuf aka ta’uu gocuufi yaabatooti daldala xixiqaa ka dalaganu fi daldala bu’aa hingodhanee irrat xiyyeefatani gaffacuu ni danda’uu. Calaa beekuufi, otoobisii xixiqaa wajiin yaabatanu ka Filaanoo Deemsa Ilgalcuu Siiyatili (West Seattle Travel Options) to’aadu. Tareesoota otoobisoota xixiqaa ykn kokoolatoota wajiin yaabatanu Ilagali Siyaatili (West Seattle) amma jiraanu, RideshareOnline irrati to’aadha. Otoobisii xixiqaa wajiin yaabatanuuf Hojimaatessuu Transit Go itti fayyaadammuu hin barbaacissu.
Maaliif ijoolleen ganna 18 gadii ulaagaallee guutuu hin dandeenne duula Imala Kee Gargalchiif?
Imala Kee Gargalchiin kan yaadame gameessa wagaa 18 akkasumas manguddoonniif sababaa adda addaatiif.
Dargaggoon durattuu ulaagaa gatii irraa bu’iitii traanziit kan $ 25 heedduun bira darbuuf guutanii jiru kan duula kana keessaan argamu (oduu dabalataaf Gaafii itti aanu laali).
Dargaggoota fii kannen biroos miidhaa qaamaa, seeraa fii itti gafatamummaa maallaqaa irraa ittisuu barbaanna. Yaabbiin tolaa Imala Kee Gargalchii wanti dabalatu iskuutara elektirikaa kubbaniyyaa kan gameessa wagaa 18 fii wagaa sana oliittii qofa.
Qarqaarsa yaabbii akkamiitu jiraDargaggootaaf?
Barattotni Manneen Barnoota Hawaasaa Siyaatil hundinuu kan sadarkaa jiddu galaa fii sadarkaa lammaffa bilaashaa dangaa malee ORCA Opportunity Youth Pass dhaaf ulaagaa ni guutan. Baratoonni Koleejji Kibba Siyaatil gatii akkaan gadi bu’aaf ulaagaa hin guutan ORCA barataan ittin darbu, akkasuma hundi barattoota Abdii Siyaatil ulaagaa guutani jiru kaardii guutumaan guututti gatiin gadi bu’eef. Dabalataan, garii manneen baruumsa dhuunfaa barattoota isaanii kaardii ORCA laatuuf akkasumas konkolaataa waloo qindeessu; mana baruumsaa kee laali odeffannoo dabalaataatiif. Yoo wanti dubbatame kun cuftuu kan si hin ilaalle tahe, dargaggooni cufti waggaa 6- 18 kaffaltii gatiin akkaan gadi bu’aa taheef ulaagaa ni guutan karaa kaardiiORCA Youthtiin. Ijoolleen waggaa 5 fi gadii tolaan yaabatu.
Hoojjacuu issa to’aacu
Geejjiba Kee Gargalcii (Flip Your Trip) galmeefadhe garru emaili baga nagaan dhuftani ykn koodii affeeruun (invite code) na hin dhaqabnee.
Uunkaa galmeefama eerga xumurteen booda daqiiqa 45 keesaat Emaili Baga Nagaan dhuftani argaacuu qabda. Dura dursii Dhiha Siyaatili (West Seattle) irra eergaa mata durre “baga gara Geejjiba Keeti Gargalcii (Flip Your Trip) nagaan dhuftee” ka jeedhu galmee emaili hinfedhamnee ykn emaili xurii/ hama keesa barbaadi. Hagg amma yoo argacuu hin dandeenye, adaraa info@FlipYourTrip.org irraat emaili nuu godhii debifnee Koodi (Code) kankee siif eergu dandeena.
Koodiin affeeruu Emaili Baga Nagaan dhuftani kiyyaa keesa jiru hin hojjatuu.
Kaardooni affeeruu toko tokoo akka nama dhamaasan irra geennee jirra, sababni isaasi qubeewwan wal fakkaattaan oof keesa qabu, kan akka
“i” guddaa ykn “L” xiqqaa
qubee “O” guddaa fi qubee lakkoofsa “0”
qubee “S” guddaa fi lakkoofsa “5”
Ini kuni yo si ilaalu ta’ee, adaarra Koodii Affeeruu kee kara lamaanun yaali. Suniileen yo hin hojjaanee, tari info@FlipYourTrip.org dhani emaili nu eergi.
Qajeelcha sadarkaa sadarkaa
Fuula kumputaraa irraatti qajeelcha sadarkaa sadarkaa kan PDF banuuf cuqaasi